Mhepo Inopisa Shanduri Vagadziri - China Mhepo Inopisa Shanduri Fekitori & vanotengesa
Nyowani Mhepo Dehumidifier
Kuongorora mhando yemweya uye mwando mumba mako zvakakosha kune hutano hwako uye kugadzikana, pamwe nekudzivirira imba yako nezvinhu. Holtop central dehumidifier yakagadzirirwa kushanda nemamwe masisitimu eHVAC kuunza nyowani uye yakachena mweya wekunze kumba kwako. Kushanda Musimboti weHoltop Nyowani Mhepo Dehumidification Maitiro Iyo Holtop nyowani yekuchenesa mweya uye dehumidification sisitimu inotora musimboti wekutonhora dehumidification. Nekuderedza kudziya kwemhepo, iyo yakawandisa ...
Inonzwisisika Yekuyerera Plate Kupisa Kwevatengesi
Kushanda Musimboti weSensible Crossflow Plate Heat Exchange Exchange: Vaviri vavakidzani vealuminium mapepa anoumba chiteshi chemhepo nyowani kana yekudzimisa mweya. Kuchenesa kunoendeswa kana hova dzemhepo dzichiyerera dzichidarika nemumatanho, uye mweya mutsva uye mweya wekufema wakaparadzaniswa zvachose. Zvimiro: Inonzwisisika kupisa kupora Kwese kupatsanurwa kwemhepo nyowani & pedza mweya hova Kuita kupisa kugona kusvika ku80% 2-padivi muchina wekudhinda kuumba Yakapetwa yakapetwa mupendero Zvakakwana zvakabatana kubatana. Kuramba kwekumanikidza mutsauko kumusoro ...
Muchinjikwa Counterflow Plate Kupisa Kwevatengesi
Kushanda musimboti weCross Counterflow Inonzwisisika Mhepo kune Mhepo Plate Heat Shanduri: Vaviri vavakidzani aluminium mafirita vanoumba mugero wemutsva kana wekupedza mweya rwizi. Kuchenesa kunoendeswa kana hova dzemweya dzakasarudzika dzichiyerera dzichidarika uye nzizi dzemhepo dzakasarudzika dzinoyerera dzichipinda nemumatanho, uye mweya nyowani uye mweya wekuzadza wakaparadzaniswa zvachose. Main maficha: 1.Sensible kupisa kupora 2.Total kupatsanura nyowani & pedza mweya hova 3.Heat kupora kunyatsoshanda kusvika ku90% 4.2-padivi muchina wekuumba 5 ....
Crossflow Plate Fin Yese Yekupisa Shanduri
Kushanda Nhungamiro yeHoltop Crossflow Plate Fin Yese Yekupisa Yekuchinjisa (ER Pepa ye enthalpy yekutsinhana musimboti) Mahwendefa akapfava uye mahwendefa mahwendefa anoumba chiteshi chemhepo nyowani kana yekuzadza mweya. yakadzorerwa. Main maficha 1. Yakagadzirwa neE ER bepa, iyo inoratidzirwa neakakwira mwando kukwana, kugona kwakanaka kwemhepo, yakanakisa misodzi kuramba, uye kukwegura kuramba. 2. Yakarongeka wit ...
Huru maficha e rotary kupisa exchanger: 1. Kunyatsoshanda kweinonzwisisika kana enthalpy kupisa kupisa. 3. Kuzvichenesa-wega kunowedzera nguva yebasa, kudzikisa mutengo wekugadzirisa. 4. Double purge chikamu chinodzora carryover kubva kunetesa mweya mune yekupa mweya mweya. 5. Hupenyu-hwakazara-hunyoro kutakura hakudi kuchengetedzwa pasi peyakajairika mashandisirwo. 6.Mukati matauri anoshandiswa kugadzira zvine hungwaru mamarita eramineti kusimbisa vhiri. 7. ...